Global Voices teny Malagasy » Mahafaly Ny Rosiana Mpanohitra Ny Hetsi-panoheran’ireo Okrainiana Mpomba Ny Fidirana Ao Amin’ny Fiombonambe Eoropeana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Novambra 2013 4:55 GMT 1	 · Mpanoratra Andrey Tselikov Nandika avylavitra
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Okraina, Rosia, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna, Vaovao Mafana, Akon'ny RuNet
Oleg Tiagnibok, Okrainiana politisiana nasionalista, nikabary tao amin'ny fihaonamben'ireo mpankasitraka ny fidirana ao amin'ny EU (Fiombonambe Eoropeana) tao Kiev, Okraine. Dikasary YouTube.
Bilaogera tò teny taloha tao amin'ny LiveJournal blogger, Alexey Trankov, no nanoratra [ru] ny andro iray izay raha tsaraina amin'ny habetsahan'ny isan'ny olona nanao hetsi-panoherana teny an'araben'i Okraina, ampitahaina amin'ny isan'ny olona niady hevitra mikasika ireo hetsi-panoherana tao amin'ny Aterineto Rosiana, hoe tahàka ny Rosiana no vaky loha kokoa amin'izay mitranga ao Kiev fa tsy ry zareo Okrainiana tenany. Na dia ny fanoharana kely (ireo vinavina avy amin'ny diabe natao ny Alahady teo sy ny fihaonambe tao Kiev avo be hatramin'ny 100.000  [ru]), ny Rosiana no tena miasa loha amin'izay mitranga eo an-tokonam-baravaran'ny mpifanolo-bodirindrina amin-dry zareo.
Tsy hoe misy marimaritra iraisana any Rosia amin'ny tokony hanohizan'i Okraina ireo dingana lavabe hidirana ho ao amin'ny Fiombonambe Eoropeana — ny fitakiana nataon'ireo mpanao hetsi-panoherana — na tokony mbola hitrandraka hatrany ny fifamatorany amin'i Rosia izy. Manasarotra ny raharaha ny fisamantsamahana isam-paritra ao anatin'i Okraina, araka ny asehon'ity sarintany nakarin'i Pavel Pryanikov ao amin'ny ttolk.ru ity :
Ireo faritra telo miteny Okrainiana any andrefana, miteyn Rosiana any atsinanana, ary sady miteny Rosiana sy Okrainiana ao afovoany, dia mifanandrify amin'ny hetahetan'ny mponina amin'ny ankapobeny — ny atsinanana mpomba ny Rosiana, ny andrefana mpomba ny Tandrefana.
Ideolojika ny fisamantsamahana ao Risoa fa tsy tena jeografika loatra. i Eduard Limonov, mpanoratra ary politisiana avy amin'ny Elatra Havia, dia nanamarika fa ireo liberaly avy ao Rosia dia manohana ankolaka ireo Okrainiana mpanao hetsi-panoherana:
Taitaitra kokoa ry zareo Rosiana faran'izay Liberaly raha vao Maidan  no resahana, miohatra amin'ireo Okrainiana. Nikisaka ry zareo, namadika ary namoy ny “Maidan”-ndry zareo, saingy rehefa nahita iray avy any ivelany ry zareo dia vonona ny hitsinjaka.
Ny sasany amin'ireny mpikatrika mafàna fo liberaly ireny, toa an'i Roman Dobrokhotov, no nahatsiaro am-pitiavana ny Revolisiona Volomboasary :
Toy ny tamin'ny 2004, nambabo ny foko ny Okrainiana. Raha mitaha amin'ireo ntaolo fatritran'olona izay nampisamboaravoara an'i Rosia, dia rivotra madio io
Ny hafa, toa an'i Arkadiy Babchenko, mpanao gazety, dia nanao fampitahana  [ru] ny hetsi-panoherana tao amin'ny Kianja Rosiana Bolotnaya, izay tohanan'ny sasany ny hoe nisy nisompatra tamin'ny alàlan'ny fisolelahana tamin'ny governemanta :
[…] aza averina ny hadisoantsika. Aoka tsy hisy famoriam-bahoaka ho voasazy. […] Tsy afaka ny hanao izany izahay, fa ianareo angamba.
Sady atsy no aroa ny sasany amin'ireo liberaly, toa an'i Oleg Kozyrev, vehivavy mazàna hita manentana hetsi-panoherana, izay nanoratra hoe :
Ny zavatra notapahana tao Kieva tamin'izao dia ny hoe iza no handoany sarany ho an'i Okraina — ireo Rosiana misotro ronono sa ireo Alemàna misotro ronono
Etsy andaniny i Dmitry Bavyrin, mpahay lalàna momba ny zon'ny isam-batan'olona avy amin'ireo mpifikitra amin'ny nentin-drazana, dia naka fomba fijery tena politika [ru] mikasika ny sahotaka Okrainiana. Ho azy, tsy misy antony tokony hanohanan'ny Rosiana ny fidiran'i Okraina ho ao amin'ny Fiombonambe Eoropeana, satria fahaverezana ho an'i Rosia izany, na amin'ny lafiny sarintany politika, na toekarena. Nokianiny ihany koa ireo mpikambana avy amin'ny fanoherana izay manohana ireo Okrainiana mpanao hetsi-panoherana ary tonga hatramin'ny fanamaivanana ny hetsika demaokratikan'ny Rosiana:
avy amin'ny fomba fijerin'ny rangahy iray teny an'arabe, tsy misy na iray aza antony hanohanan'ny politisiana Rosiana ny tolon'i Okraina ho ao amin'ny faritra Euro. Na iray aza, na sombiny kely. Raha tsy hoe mandefa fotsiny petrakevitra sarotra hamarinina avy hatrany angaha ianao hoe ireo “deba be avy ao amin'ny Departemantam-panjakana” no handoa izany. Ary io fisainana io atsy ho atsy no hoentin'ny milin'ny fampielezan-kevitry ny fanjakana hody any amin'ilay lehilahy eny an'arabe.
Mandritra izany, Okrainiana iray biloagera manoratra amin'ny teny Rosiana, Aleksandr Volodarsky, mihevitra [ru] fa tahaka ny tabataba be tsy misy dikany akory ilay toe-draharaha manontolo:
Sarisary iray azo heverina — Mijangajanga amin'i Rosia hatramin'ny 2015 [Ny filoha] Yanukovich, ary tampotampoka avy eo mikisaka manakaiky ny Fiombonambe Eoropeana alohan'ny fifidianana. […] Raha mametraka ny fifanarahana ry zareo izao ankehitriny izao, avy eo ao anatin'ny roa taona ho tonga saina ny vahoaka fa tsy nahazo tombontsoa tamin'izany na kely aza : tsy ho manga ny lanitra, tsy ho azo fohana ny rivotra, ary hikatona ny sisintany, ary dia ho henjana tsy mbola nisy toy izany ireo masoivoho Eoropeana. Hisy ny korontana avy eo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/11/26/54855/
 no nanoratra : https://www.facebook.com/trankov/posts/10153519298590506
 avo be hatramin'ny 100.000: https://www.facebook.com/ilya.klishin/posts/10201981894383299?comment_id=6271580&offset=0&total_comments=4
 nanao fampitahana: https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/430107633756142
 naka fomba fijery tena politika : https://www.facebook.com/bavyrin/posts/612279258831685
 mihevitra : http://shiitman.net/2013/11/25/po-evromajdanu/